HomeGUUDShaqooyinkaWasaaradda Hantidhowrka iyo Ganacsiga Maaliyaddu si ay u Iibsadaan qandaraasleyda Maaliyadda
Khasnadda iyo maaliyaddu wasaaradda tababaradu waxay samayn doonaan kontaroolka hantida
8, oo kujira fasalada Adeegyada Maamulka Guud ee lagu shaqaaleysiin doono Madaxtooyada Jooga Gudiga Xisaabaadka Maaliyada ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Maaliyadda. Imtixaanka Galitaanka Shahaadada waxaa loo qaban doonaa shaqaaleynta kontroolka 15 Trainee Treenury ee shaqaalaha “Koontaroolka Maaliyada ee Trainee”.
Murashaxiinta Kormeeraha Maaliyadda ee tababarayaasha ee codsan doona imtixaanka gelitaanka;
a) Buuxi shuruudaha guud ee lagu sheegay maqaalka 657 ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee 48,
b) Mid ka mid ah kulliyadaha Sharciga, Dhaqaalaha, Sayniska Siyaasadda, Maamulka Ganacsiga, Dhaqaalaha iyo Sayniska Maamulka ama ugu yaraan mid ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ku yaal Turkiga ama dibedda oo u dhigma u aqbalay Golaha Tacliinta Sare.
c) Imtixaannadii 2018 iyo 2019 ee lagu qabtay Cabiraadda, Xulashada iyo Xarunta Meelaynta (ÖSYM), mid ka mid ah Imtixaanada Xulashada Dadweynaha (KPSS A Group) ayaa leh natiijada ugu sareysa ee 48 (sideetan) iyo 80 (kabadan sideed) mid ka mid ah codsadayaasha. (Murashaxiinta leh dhibco la mid ah kan musharraxii ugu dambeeyay ayaa laga aqbalay imtixaanka),
d) Inaad haysatid ugu yaraan toddobaatan (2018) dhibco ah Imtixaanka Aqoonta Luuqadda Shisheeye (YDS ama e-YDS) oo ay sameysay OSYM gudaha 2019 ama 70 ugu yaraan mid ka mid ah luuqadaha Ingiriiska, Jarmalka ama Faransiiska,
e) (1 Janaayo 2019) ma uusan gaarin da'da 35 (soddon iyo shan) sida maalinta koowaad ee Janaayo ee sanadkaasoo imtixaanka gelitaanka la furay (wuxuu dhashey ama ka dib 01 / 01 / 1984),
f) xaaladda caafimaad ee Turkey si ay ugu adeegaan oo dhan, ma sahla dhammaan noocyada xaaladaha cimilada iyo safarka,
g) Markuu qabtay, laga reebay ama dib loo dhigay adeeg militari ee murashaxiinta ragga ah,
h) Codsi gudahood waqtiga kama dambaysta ah,
Kuwa aan qaadan imtixaanka gelitaanka Imtixaanka Xisaabaadka Maaliyadeed labo jeer oo aan dib dambe imtixaankan u qaadan karin.
Goobta Codsiyada, Taariikhda iyo TILMAAMAHA LOO BAAHAN YAHAY
Codsiyada Imtixaanka Galitaanka waxaa laga sameyn doonaa laga bilaabo 27 Noofambar 2019 taarikhda 12 Diseembar 2019 dhamaadka saacadaha shaqada (18: 00) ee https://hkkbasvuru.hmb.gov.tr ​​ama waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee Wasaaradda. Arjiga imtixaanka ayaa la dhammaystiri doonaa iyadoo la gelinayo sawirka oo la buuxiyo Foomka Codsiga. Codsiyada lagu sameeyo gacanta ama boostada lama aqbali doono.
Foomka imtixaanka, Meesha iyo Waqtiga
Imtixaanka gelitaanka waxaa lagu qaban doonaa labo marxaladood: qoran (mid aha) iyo mid hadal ah. Imtixaanka qoraalka ah waxaa lagu qaban doonaa afar kalfadhi oo kala gooni ah 28-29 Diseembar 2019 subixii iyo galabtii Xarunta Xarunta Dakhliga ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Maaliyadda ee Jamhuuriyadda Turkiga (25 Mart Mah. İstiklal Street, Yenimahalle / ANKARA).
Haddii goobta iyo / ama taariikhda imtixaanka la beddelo, xaaladda waxaa lagu shaaciyey websaydhka Wasaaradda. Ogeysiiskaan waa mid ogeysiin ah.